आफ्नैले लुटेको त्यो कलिलो शरीर - Muldhar Post
आफ्नैले लुटेको त्यो कलिलो शरीर
पत्रपत्रिका खबर २०७६, ३ आश्विन शुक्रबार 2825 पटक हेरिएको
मञ्जु मिश्रा-कुनै व्यक्ति, जो तपाईंको बाल्यकालको डरलाग्दो यथार्थसँग जोडिएको छ । त्यही व्यक्ति जसले तपाईं बालिका हुँदा कलिलो शरीरमाथि आफ्ना वयस्क अंगले मनलाग्दी गरेको थियो । अनि त्यो याथार्थ आजसम्म पनि तपाईंसँग मात्रै सीमित छ, डरलाग्दो विगत बनेर । हो त्यही व्यक्ति १५/१६ वर्षपछि अचानक भेटिन्छ । पारिवारिक मर्यादाका कारण सार्वजनिक स्थानमा तपाईंले उसलाई नमस्कार गर्नुपर्छ । अनि, उ हाँस्दै तपाईंको नजिक आउँछ । शरीरमा धाप मार्छ र भन्छ, ‘कति ठूली भइसकिछौ । कुनै सम्पर्क, भेटघाट नै छैन ।’यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन । पारिवारिक सम्बन्धलाई आधार बनाएर तपाईंको गाला चिमोट्न पनि भ्याउँछ । अनि नजिक आएर भन्छ, ‘सानामा म तँलाई आफ्नै हातले खेलाउँथे । मेरो काखमा राख्थेँ, बिर्सिस् ?’
त्यतिबेला तपाईको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ ? मेरो एक साथीले माथिको घटना आफैले बेहोरेकी छ । हालैको एकदिन उसले मध्यरातमा मेरो निन्द्र खल्बल्याएर फोनबाट एकै सासमा घटना सुनाइ । अनि मुुर्मुरिँदै भनि, ‘त्यसले के सोचेको ? म त्यसलाई मारिदिउँ ? तँ त वकिल भन् त, त्यसलाई मार्दा मलार्ई कानून लाग्छ कि लाग्दैन ? त्यसलाई के सजाय दिन सकिन्छ ?’
उसको अनुसार घटना यस्तो थियो – १५ वर्ष अघि, ‘मामा आए घोडा…’ भनेर कविता कण्ठ गर्दै एक सासले सुनाईसक्ने उनको मामा एकदिन हातभर चकलेट र झोलाभर खेलौना लिएर आए । उसको हातभरी अरेन्जबल टफी राखीदिए । अनि उसका गाला मुसारे, ढाड थप्थपाए र काखमा राखे । मामा उसलाई तलैलता भएको जामा पनि ल्याइदिएका थिए । तर, त्यो जामा लगाउनुअघि उसलाई नाङ्गो पारेर एकछिन ‘कुरी कुरी…’ भन्दै जिस्क्याए । हजुरआमा र आमाबुवाले त्यसलाई अनौठो मानेनन् । बरु सबैजना मामासँगै मरीमरी हाँसे ।
उ त्यतिबेला लाजले भुतुक्कै भएकी थिई । सबैले जिस्क्याएपछि के भन्न सक्थी र ! त्यो दिनको भोलीपल्ट बिहान बुवाआमा उठिसके पछि मामा भान्जी सुतिरहेको ओच्छ्यानमा गए । भाञ्जीसँग एकछिन गफ गर्न आएका मामाले उसका कलिला बुबु चलाए । ‘सुसु’ गर्ने ठाउँ खेलाए । त्यतिले मात्रै पुगेन आफ्नो वयस्क शरीर जतासुकै छुन चुम्न लगाए ।
तिनै साना बुबुहरु बढेर अहिले स्तन भएका छन् । सुसु बढेर ‘गुप्ताङ्ग’ । उसले धेरैपछि थाहा भयो ‘मामाले उसलाई माया गरेको होईन शोषण गरेको रहेछ ।’उसलाई बुवा आमासँग मामाले आफूसँग गरेको व्यवहार भन्ने आँट आएन । तर, मामा आउँदा जहिलेपनि यो सिलसिला दोहोरिन थाल्यो । अझ बढ्दै गयो । अहिले उनलाई थाहा भयो, त्यो त हाडनाता करणी पो रहेछ ।
मेरी बालापनको साथीको जस्तै भोगाइ अर्की शिक्षक साथीको पनि छ । उनी किशोर अवस्थामा हुँदा सहोदर काकाले पटक पटक शोषण गरेका थिए । उनले त आफ्नी आमालाई काकाले आफूमाथी गरेको दुव्र्यवहार सुनाएको पनि थिइन् । त्यतिबेला आमाले उनको मुख थुन्दै भनेकी थिइन्, ‘आइन्दा यस्तो कुरा नर्गनु ! उत्ताउलिएर नहिँड् ।’ काकाको डरले गर्दा उनले १६ वर्ष नपुग्दै उनले गाउँकै एउटा केटासँग भागेर विवाह गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘काकाले ममाथि गरेको अत्याचारबारे मुख खोल्न नसकेपछि विहे गर्नुको विकल्प मैले देखिनँ । त्यसबेला नेपालमा कस्तो कानुन थियो भन्ने थाहा पनि थिएन । अहिले भए काका न साका जेलमै कोचेर छोड्थें ।’विहेपछि माइत जाँदा काकाले ‘आखिर तँलाई पोइनै चाइएको रै’छ’ भनेको आजसम्म भूलेकी छैनन् । न त कसैलाई भनेकी नै छन् ।
समय घर्किएपछि भन्नुको अर्थ पनि हुँदैन । त्यसबेलाको केस उजुरी गर्न न हदम्याद पुग्छ, न त प्रमाण नै भेटिन्छन् । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको लागि हदम्यादको अत्यन्त ठुलो महत्व हुन्छ । जुन हाम्रो कानुनले बढीमा एक वर्ष मात्र भनेर तोकेको छ । प्रमाणहरु नष्ट भएको अवस्थामा केवल जाहेरी दरखास्त वा उजुरीमात्रलाई प्रमाण मान्नु पर्ने हुँदा मुद्दा कमजोर पर्छ । कानूनी रुपमा न्याय पाउन कठिन छ ।
कानूनी रुपमा न्याय सहज नभएपनि मुख खोलेमा पीडितलाई केही राहत हुनसक्छ भन्ने पछिल्ला केही घटनाले भने देखाएका छन् । ‘अब त अति भो, कति सहने ?’ भन्दै संसारभर ‘मी टू अभियान’ नै चलेको छ । महिलाहरुले आफूलाई कसले र कसरी यौन हिंसा गर्यो भन्ने कुरा अनलाईन मार्फत उजागर गरिरहेका छन् । यो अभियानले विश्वका धेरै महत्वपुर्ण मानिसहरुको चरित्र उदांगो बनाइदिएको उदाहरण पनि छ ।
नेपालमा पनि ‘मी टू’ अभियानले केही हदसम्म पुराना यौन अपराधहरु बाहिर ल्याउने प्रयास गर्यो । काठमाडौं महान गरपालिकाकी एक पूर्व कर्मचारीले तत्कालिन मेयर केशव स्थापितमाथि यौनजन्य हिंसाको आरोप लगाईन् । उनले स्थापितसँग ‘क्वालिटी टाइम स्पेण्ड’ नगर्दा जागिर गुमाउनु परेको थियो भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्रीले उनलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरे । यस्ता अरु केही उदाहरण पनि छन् । यस विचारमा उल्लेख भएका मेरा दुई साथीको घटना पनि उनीहरुले धक नमानी खोल्ने हो भने उनीहरुलाई त्यसबेला गरेको कर्तुतको सजाय सामाजिक रुपमा दिलाउन सकिन्छ ।
मलाई लाग्छ, ति दुई पुरुषबाट हिंसामा पर्ने मेरा दुई साथी मात्रै थिएनन् होला । उनीहरुबाट त्यतिबेला अरु बालिकाहरु पनि हिंसामा परे होलान् । मेरा साथीहरुले आफूमाथिको घटना सार्वजनिक गरेभने बाँकी हिंसामा परेकाले पनि मुख खोल्न सक्छन् । त्यसपछि तिनीहरुलाई सामाजिक कारबाही गर्ने बाटो अझ फराकिलो हुन सक्छ । मञ्जु मिश्रालेले लेखेको फिचर स्टोरी महिला खबरबाट साभार गरिएको हो ।